Ukuchaphazeleka kwe-chromatic kunye nokugqwetha kuyichaphazela njani iifayili ze-imail-Chengdu Ruibo Technology Co, Ltd.
Ukuchaphazeleka kwe-chromatic kunye nokugqwetha kuyichaphazela njani iifayili ze-ima
1.1 Yintoni i-chromatic aberration
Ukuchithwa kwe-chromatic kubangelwa ngumahluko wokuhanjiswa kwezinto. Ukukhanya kwendalo kudityaniswe nommandla obonakalayo wokukhanya onobude obude obuyi-390 ukuya kuma-770 nm, kwaye ezinye zizinto ezingabonwayo ngamehlo oluntu. Ngenxa yokuba izixhobo zinee-indices ezahlukeneyo zokwenza ukukhanya kwamaza ahlukeneyo okukhanya okukhanyayo, ukukhanya kombala ngamnye kunendawo yokucinga eyahlukileyo kunye nokukhulisa, ekhokelela kwi-chromatism yesikhundla.
1.2 Ukuchaphazeleka kwe-chromatic kuwuchaphazela njani umgangatho womfanekiso
(1) Ngenxa yobude obude obuhlukeneyo kunye nesalathiso sokukhanya semibala eyahlukeneyo yokukhanya, indawo-yento ayinakujoliswa kakuhle kwindawo enye yomfanekiso ogqibeleleyo, ke ifoto iya kufiphala.
(2) Kananjalo, ngenxa yokuphakanyiswa okungafaniyo kwemibala eyahlukeneyo, kuyakubakho "imigca yomnyama" emaphethelweni eendawo zemifanekiso.
1.3 Ukuchaphazeleka kwe-chromatic kuyichaphazela njani imodeli ye-3D
Xa amanqaku emifanekiso ene "imigca yomnyama", iya kuchaphazela isoftware ye-3D yokumodareyitha ukuze ihambelane nenqaku elinye. Kwinto enye, ukuthelekiswa kwemibala emithathu kunokubangela impazamo ngenxa ye "imigca yomnyama". Xa le mpazamo iqokelela enkulu ngokwaneleyo, iya kubangela "ukwahlulwa".
1.4 Uyiphelisa njani i-chromatic aberration
Ukusetyenziswa kwesalathiso esahlukileyo sokusasazeka kunye nokusasazeka okungafaniyo kokudityaniswa kweglasi kunokuphelisa ukungafani kwe-chromatic. Umzekelo, sebenzisa isalathiso esisezantsi sokuhambisa kunye neglasi yokusasazeka ephantsi njengeelensi eziguqukayo, kunye nesalathiso sokuphinda ubonakalise kunye neglasi yokusabalalisa ephezulu njengeelensi zeconcave.
Iilensi ezidityanisiweyo zinobude obufutshane obugxile kumgama ophakathi kunye nobude obude obude kwimitha emide kunye nemifutshane. Ngokuhlengahlengisa ukugoba okungaphezulu kwelensi, ubude obugxile bokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu bunokulingana ngokuchanekileyo, okususa ngokusisiseko i-chromatic aberration.
Kodwa ukuphambuka kwe-chromatic akunakupheliswa ngokupheleleyo. Emva kokusebenzisa ilensi edibeneyo, into eseleyo ye-chromatic ibizwa ngokuba "sisekondari". Ixesha elide lokujolisa kwelensi, ngakumbi ukuhla kokuhlala kwe-chromatic. Ke ngoko, kuvavanyo lwasemoyeni olufuna imilinganiselo echanekileyo, isekondari ayinakuhoywa.
Kwithiyori, ukuba ibhendi ekhanyayo inokwahlulahlulwa ibe luhlaza okwesibhakabhaka-luhlaza kunye nobomvu oluhlaza-obomvu, kunye neendlela ze-achromatic zisetyenziswa kula maxesha mabini, isibuko sesibini sinokupheliswa. Nangona kunjalo, kufunyenwe ukubala ukuba ukuba i-achromatic yokukhanya okuluhlaza kunye nokukhanya okubomvu, ukuphambuka kwe-chromatic kokukhanya okuluhlaza kukhula; ukuba i-achromatic yokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokukhanya okuluhlaza, i-chromatic aberration yokukhanya ebomvu iba nkulu. Kubonakala ngathi le yingxaki enzima kwaye ayinampendulo, inqanaba lesibini elinenkani alinakupheliswa ngokupheleleyo.
Ngethamsanqa, izibalo zethiyori zifumene indlela ye-APO, eyokufumana izixhobo ezizodwa zelensi yokusasazeka kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kubomvu obomvu kusezantsi kakhulu kwaye ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kukukhanya okuluhlaza kuphezulu kakhulu.
I-Fluorite yinto ekhethekileyo, ukusasazeka kwayo kuncinci kakhulu, kwaye inxalenye yokusabalalisa isihlobo sisondele kwiiglasi ezininzi ezibonakalayo. I-Fluorite ine-index ephantsi yokubonisa, iyanyibilika emanzini, kwaye inenkqubo engalunganga-kunye nozinzo lweekhemikhali, kodwa ngenxa yeempawu zayo ezintle ze-achromatic, iba yinto ebonakalayo enqabileyo.
Zimbalwa iifolorite ezicocekileyo ezinokusetyenziselwa izinto ezibonakalayo kwindalo, zidityaniswe nexabiso eliphezulu kunye nobunzima ekusebenzeni, iilensi zefluorite ziye zafana neelensi eziphezulu. Abavelisi beelensi ezahlukeneyo abazigcinanga kwimizamo yokufumana indawo ye fluorite. Iglasi yesithsaba se-Fluorine yenye yazo, kwaye iglasi ye-AD, iglasi ye-ED kunye neglasi ye-UD zizinto ezinjalo.
Iikhamera zeRainpoo oblique zisebenzisa iglasi ye-ED esezantsi kakhulu njengoko iilensi zekhamera ukwenza ukuphambuka kunye nokugqwetha kube kuncinci kakhulu. Ayipheleli nje ekunciphiseni ukubakho kwesihlangu, kodwa kunye nemodeli yempembelelo ye-3D iphuculwe kakhulu, nto leyo ephucula kakhulu ukusebenza kweekona zokwakha kunye ne-facade.
2.1 Yintoni ukugqwetha?
Ukuphazamiseka kwelensi ligama eliqhelekileyo lokugqwetha ngokwembono, Oko kukuthi, ubugqwetha obubangelwa ngumbono. Olu hlobo lokugqwetha luya kuba nefuthe elibi kakhulu kukuchaneka kweefoto. Emva kwayo yonke loo nto, injongo ye-photogrammetry kukuphinda-phinda, hayi ukubaxa, ngenxa yoko kuyafuneka ukuba iifoto zibonise ulwazi lokwenyani lweempawu zomhlaba ngokusemandleni.
Kodwa ngenxa yokuba olu luphawu lwelensi (iileve eziguqukayo ziguqula ukukhanya kunye nelensi ekhanyayo idibanisa ukukhanya), ubudlelwane obuchazwe kuyilo olubonakalayo ngulo: imeko eguqukayo yokuphelisa ukugqwetha kunye nemeko ye-sine yokuphelisa ikhoma yesithambiso ayinakwaneliswa kwangaxeshanye, ke ukugqwetha kunye nokubonakala kwe-chromatic aberration efanayo ayinakususwa ngokupheleleyo, kuphuculwe kuphela.
Kulo mzobo ungasentla, kukho ubudlelwane obulinganayo phakathi kokuphakama komfanekiso kunye nokuphakama kwento, kwaye umlinganiso phakathi kwezi zimbini kukukhulisa.
Kwinkqubo efanelekileyo yokucinga, umgama phakathi kwento yenqwelomoya kunye nelensi ugcinwa uzinzile, kwaye ukukhulisa lixabiso elithile, ke kukho ubudlelwane obulinganayo kuphela phakathi komfanekiso kunye nento, akukho kugqwetha konke konke.
Nangona kunjalo, kwinkqubo yokwenziwa kwemifanekiso, ukusukela ekubeni umjelo ophambili weray eyintloko uhluka ngokwanda kwe-engile yentsimi, ukukhulisa akusekho rhoqo kumfanekiso womfanekiso wesibini sezinto zokudibanisa, oko kukuthi, ukukhulisa Umbindi womfanekiso kunye nokukhuliswa komphetho akuhambelani, umfanekiso uphulukana nokufana kwento. Esi siphene sonakalisa umfanekiso sibizwa ngokuba kukugqwetha.
2.2 Ukugqwetha kukuchaphazela njani ukuchaneka
Okokuqala, impazamo ye-AT (Aerial Triangulation) iya kuchaphazela impazamo yelifu elingqinelanayo, yiyo loo nto impazamo ehambelana nemodeli ye-3D. Ke ngoko, ingcambu ithetha isikwere (i-RMS yempazamo yokuPhinda) yenye yezalathi ezibalulekileyo ezibonisa ngokuchaneka kokugqibela komzekelo. Ngokujonga ixabiso le-RMS, ukuchaneka kwemodeli ye-3D kunokugwetywa ngokulula. Ixabiso elincinci le-RMS, kokukhona kuchaneka imodeli.
2.3 Zeziphi izinto ezichaphazela ukuphazamiseka kwelensi
Ngokubanzi, kokukhona ubude be-lens egxile ekugxilwe kuyo, kokuncinci kukugqwetha; mfutshane ubude obugxile kokukhona, kokukhona ukuphambuka kukukhulu. Nangona ubugqwetha be-lens ekugxilwe kuyo ngobude obude kakhulu (iilensi zefowuni) sele incinci kakhulu, enyanisweni, ukuze kuthathelwe ingqalelo ukuphakama kwendiza kunye nezinye iiparameter, ubude obugxile belensi yekhamera yophando yomoya ayinakuba inde leyo.Umzekelo, lo mfanekiso ulandelayo yilensi yefowuni yakwaSony 400mm. Uyabona ukuba ukuphambuka kwelensi kuncinci kakhulu, phantse kulawulwa ngaphakathi kwe-0.5%. Kodwa ingxaki kukuba xa usebenzisa le lens ukuqokelela iifoto kwisisombululo se-1cm, kwaye ukuphakama kwendiza sele kuyi-820m. Let drone ukubhabha kule ndawo iphakamileyo ayinangqondo kwaphela.
Ukulungiswa kwelensi lelona nyathelo lililo linzima kwaye liphezulu kwinkqubo yokuvelisa ilensi, ebandakanya ubuncinci iinkqubo ezi-8. Inkqubo yangaphambili ibandakanya i-nitrate-barrel-barrel-sand-hanging-grinding, kwaye inkqubo yasemva kwexesha ithatha i-core-coating-adhesion-ink coating. Ukuchaneka kokuqhubekeka kunye nokusingqongileyo kokulungiswa ngokuthe ngqo kugqiba ukuchaneka kokugqibela kweelensi ezibonakalayo.
Ukuchaneka kokusebenza okuphantsi kunesiphumo esibulalayo sokugqwetha i-imaging, ekhokelela ngokuthe ngqo kukugqwetha okungafaniyo kweelensi, ezingenakuphakanyiswa okanye zilungiswe, eziya kuthi zichaphazele ngokungagungqiyo imodeli ye-3D.
Umzobo 1 ubonakalisa ukuthambeka kwelensi ngexesha lenkqubo yokufakwa kwelensi;
Umzobo 2 ubonakalisa ukuba ilensi ayigxili ngexesha lenkqubo yokufakwa kwelensi;
Umzobo 3 ubonisa ufakelo oluchanekileyo.
Kwezi meko zintathu zingasentla, iindlela zokufaka kumatyala amabini okuqala zonke ziindibano "ezingalunganga", eziza kutshabalalisa ulungiso olulungisiweyo, olukhokelela kwiingxaki ezahlukeneyo ezinje ngokufiphala, ukungalingani kwesikrini kunye nokusasazeka. Ke ngoko, ulawulo olungqongqo olungqongqo luyafuneka ngexesha lokulungiswa kunye nokudityaniswa.
Inkqubo yendibano yelensi
Inkqubo yendibano yeelensi ibhekisa kwinkqubo yemodyuli yelensi iyonke kunye nesenzi sokucinga. Iiparameter ezinje ngokuma kwendawo ephambili yento yokuqhelaniswa kunye nokugqwetha okungathandabuzekiyo kwimilinganiselo yokulinganisa yekhamera kuchaza iingxaki ezibangelwe yimpazamo yendibano.
Ngokubanzi, uluhlu oluncinci lweempazamo zebandla lunokunyamezelwa (kunjalo, ukuphakama kokuchaneka kwendibano, kungcono). Logama iiparameter zokulinganisa zichanekile, ukugqwethwa komfanekiso kunokubalwa ngokuchanekileyo, emva koko ukususwa komfanekiso kungasuswa. Ukungcangcazela kunokubangela ukuba iilensi zihambe kancinci kwaye zitshintshe iiparameter zokugqwetha kwelensi. Yiyo loo nto ikhamera yophando yemveli yendalo kufuneka ilungisiwe kwaye iphinde ilungelelaniswe emva kwexesha.
Iilensi zekhamera ye-Rainpoo oblique
Kabini Gauβ ulwakhiwo
Iifoto ze-Oblique zineemfuno ezininzi zelensi, ukuba zibencinci ngobukhulu, ukukhanya kubunzima, ukuthoba imifanekiso kunye nokuphambuka kwe-chromatic, ukuphindaphinda kombala, kunye nokusonjululwa okuphezulu. Xa kuyilwa ubume beelensi, ilensi yeRainpoo isebenzisa ubume obuphindwe kabini beGaββ, njengoko kubonisiwe kulo mzobo:
Isakhiwo sahlulwe ngaphambili kwelensi, uvalo, kunye nomva kwelensi. Umphambili nomva ungabonakala "ulinganayo" ngokubhekisele kwidayaphragm. Ulwakhiwo olunje luvumela ezinye ze-chromatic aberration eziveliswe ngaphambili nangasemva ukuba zirhoxise ngaphandle, ke ngoko zinenzuzo enkulu kulungelelwaniso kunye nolawulo lobungakanani beelensi kwinqanaba lasemva kwexesha.
Kwikhamera ye-oblique edityaniswe neelensi ezintlanu, ukuba ilensi nganye iphindwe kabini kubunzima, ikhamera iya kubunzima amaxesha amahlanu; ukuba ilensi nganye iphindaphindwe kabini ngobude, ikhamera ye-oblique iya kuba nobukhulu obuphindwe kabini ubuncinci. Ke ngoko, xa uyila, ukuze ufumane inqanaba eliphezulu lomfanekiso ngelixa uqinisekisa ukuba ukuphambuka kunye nevolumu zincinci kangangoko kunokwenzeka, iilensi ze-aspheric kufuneka zisetyenziswe.
Iilensi ze-aspherical zinokuphinda ukuqaqambisa ukukhanya okusasazekileyo kumhlaba ongqukuva ubuyele kugxilwe, ayisiyi kuphela ukufumana isisombululo esiphezulu, yenza isidanga sokuphinda sivelise umbala, kodwa ikwanokugqibezela ukulungiswa kokuphambuka ngenani elincinci leelensi, ukunciphisa inani leelensi ukwenza ikhamera ilula kwaye incinci.
Ukulungiswa kokugqwetha iteknoloji
Impazamo kwinkqubo yendibano iya kubangela ukuba iilensi zokugqwetha okungaphezulu kunyuke. Ukunciphisa le mpazamo yindibano yinkqubo yokulungiswa kokugqwetha. Eli nani lilandelayo libonisa umzobo wesikim sokuphambuka kwelensi. Ngokubanzi, ukufuduswa kokuphambuka kuyalingana ngokubhekisele ezantsi ngasekhohlo- ikona ephezulu ngasekunene, ebonisa ukuba ilensi ine-engile ejikelezayo ejonge kwicala elinye, elibangelwa ziimpazamo zendibano.
Ke ngoko, ukuze kuqinisekiswe ukuchaneka okuphezulu komfanekiso kunye nomgangatho, iRainpoo yenze uthotho lweetsheki ezingqongqo kuyilo, ukuqhubekeka kunye nendibano:
Kwinqanaba lokuqala loyilo, ukuze kuqinisekiswe ukungqinelana kwendibano yeelensi, kangangoko kunokwenzeka ukuqinisekisa ukuba zonke iindiza zokufaka iilensi zenziwa ngocingo olunye;
②Ukusebenzisa izixhobo ezijikijelwayo zangaphandle kwi-lathes ezichanekileyo ukuze kuqinisekiswe ukuba ukuchaneka koomatshini kufikelela kwinqanaba le-IT6, ngakumbi ukuqinisekisa ukuba ukunyamezelana kwe-coaxiality yi-0.01mm;
Iilensi nganye ifakelwe iseti yeeplagi zentsimbi ezichanekileyo eziphezulu kumgangatho wangaphakathi wesetyhula (ubungakanani nganye iqulethe ubuncinci imigangatho yokunyamezelana eyi-3), icandelo ngalinye lihlolwe ngokungqongqo, kunye nokunyamezelana kwesikhundla njengokufana kunye nokujongwa ngokungafaniyo kufunyenwe isixhobo sokulinganisa sokulungelelanisa ezintathu;
Emva kokuba ilensi nganye ivelisiwe, kufuneka ihlolwe, kubandakanya isisombululo seprojekhthi kunye novavanyo lweetshathi, kunye nezalathi ezahlukeneyo ezinje ngesisombululo kunye nokuveliswa kwakhona kwelensi.
Ii-RMS zeelensi zemvula tec